Waa maxay sababta iibka iyo kooxaha suuqgeyntu ugu baahan yihiin daruur ERP | Martech Zone
Hogaamiyaasha suuq geynta iyo iibinta waa qeybaha udub dhexaadka u ah wadista dakhliga shirkada. Waaxda suuqgeynta ayaa door muhiim ah ka ciyaareysa kor u qaadida ganacsiga, faahfaahinaysa waxyaabaha ay bixiso, iyo sameynta waxyaabaha ay ku kala duwan yihiin. Suuqgeyntu sidoo kale waxay abuurtaa xiisaha sheyga waxayna abuurtaa horseedyo ama rajo. Riwaayad ahaan, kooxaha iibku waxay diiradda saaraan u beddelashada rajada macaamiisha bixinta. Hawlaha waxay si dhow isugu xiran yihiin oo muhiim u ah guud ahaan guusha ganacsiga.
Marka la eego saameynta iibka iyo suuqgeyntu ku leeyihiin khadka hoose, waxaa muhiim ah in go'aan qaadayaashu ay kordhiyaan waqtiga iyo tayada ay heli karaan, iyo in sidaas la yeelo waa inay aragti ka yeeshaan sida kooxuhu u fulinayaan dhammaan khadka wax soo saarka. Horumarka dhanka teknolojiyadda ayaa sahlay helitaanka waqtiga dhabta ah ee helitaanka macluumaadka shaqaalaha ganacsiga iyo macaamiishooda. Si gaar ah, tiknoolajiyada ERP daruurta ku salaysan ayaa bixisa faa'iidooyinkan.
Waa maxay Cloud ERP?
Cloud ERP waa Software ahaan Adeeg ahaan (SaaS) oo u oggolaanaya dadka isticmaala inay marin ku helaan barnaamijka softiweerka ah ee Qorsheynta Kheyraadka Ganacsiga (ERP). Cloud ERP guud ahaan waxay leedahay qiimo aad u hooseeya oo hooseeya maxaa yeelay ilaha xisaabinta ayaa la kireeyaa bisha halkii laga iibsan lahaa si toos ah loona dayactiri lahaa dhismaha. Cloud ERP sidoo kale waxay siisaa shirkadaha marin u helka barnaamijyadooda muhiimka u ah ganacsiga waqti kasta oo ka timaadda goob kasta oo ka mid ah qalab kasta.
Sidee Cloud ERP u Noqonaysaa?
Xiisaha iyo korsashada daruuraha iyo xallinta maareynta ganacsiga mobilada ayaa ahaa sii kordhaya sanadihii ugu dambeeyey. Kordhinta horumarka tikniyoolajiyadda ayaa sare u qaaday shuruudaha aaladaha isku xiran iyo xogta waqtiga-dhabta ah si looga caawiyo la socodsiinta go'aamada ganacsiga ee muhiimka ah. Adeegsiga aaladaha casriga ah sida taleefannada, kiniinnada, iyo hantida kale ee dijitaalka ah ayaa beddelay goobta shaqada.
Tan iyo markii uu faafay COVID-19, baahida loo qabo daruuraha iyo xalalka mobilada ayaa leh qarxay. Baahida loo qabo in laga ganacsado meel kasta iyo wakhti kasta waxay kordhisay baahida loo qabo isku xirnaanta daruuraha. Baahidani waxay horseeday in si deg deg ah loo qaato nidaamyada maaraynta ganacsiga mobilada ee qalabeeya shaqaalaha awood u leh inay ka shaqeeyaan meel ka baxsan xafiiska isla markaana lagu cusbooneysiiyo xogta shirkadaha waqtiga dhabta ah. Gartner wuxuu saadaaliyay in adduunka oo idil dakhliga daruuraha ayaa kori doona 6.3 boqolkiiba sanadka 2020. Dheeraad ah, softiweer ahaan adeeg ahaan (SaaS) ayaa weli ah qaybta suuqa ugu weyn waxaana la saadaalinayaa inay u koraan $ 104.7 bilyan sannadka 2020.
Acumatica aqoonsaday baahida loo qabo daruuraha iyo xalalka mobilada tan iyo markii la aasaasay 2008, waxayna si joogto ah u hagaajisaa xalalkeeda si ay si wanaagsan ugu adeegto baahiyaha soo kordhaya ee ganacsiyada kobaca suuqyada. Kaliya bishii Sebtember ee la soo dhaafay, tusaale ahaan, Acumatica ayaa ku dhawaaqday sii deynta Acumatica 2020 R2, kan labaad ee cusbooneysiinta alaabteeda labadii sanoba mar.
Siidaynta badeecada cusub waxay ka kooban tahay tiro aad u tiro badan oo casriyeyn ah, oo ay ku jiraan:
Isku-darka dalabka eCommerce ee horseedka ah Shopify
Abuurista dukumiintiyada la bixin karo ee A-ga ah ee loo yaqaan 'AI / ML-Awood-siinta', taas oo fududeyneysa sida isticmaaleyaashu u diyaarsadaan xog laga dheehan karo dashboodyada, laguna falanqeyn karo miisaska udubdhexaadka ah, loona adeegsan karo ogeysiisyada waqtiga-dhabta ah.
Dhalad ahaan Xalka software-ka POS kaas oo siiya tafaariiqleyda helitaanka alaabada-waqtiga dhabta ah, goobo badan, iyo maaraynta bakhaarka gadaashiisa dambe oo leh baarista nambarka barcode. Hadda, adeegsadayaashu waxay maamuli karaan khibrad dhan-kanaal ah iyagoon haysan shaqaale goobta jooga.
AI / ML-karti leh maaraynta kharashka sare, kaas oo lagu daro quudinta bangiyada elektiroonigga ah ee kaararka shirkadaha iyo otomatigga abuurista risiitka si loo hagaajiyo habsami u socodka isticmaalayaasha moobiilka caadiga ah iyo sidoo kale shaqaalaha xisaabinta xafiiska gadaashiisa.
Maareynta kharashka ayaa si gaar ah ugu habboon hadda waaxaha maaliyadeed ee shirkadaha. Cudurka faafa ee COVID-19 wuxuu ku hogaamiyay shirkadaha inay dhigaan xoojinta cusub maareynta kharashka, iyadoo diirada la saarayo sidii loo heli lahaa aagag kaydinta kharashka. Dhacdooyinka aan horay loo arag ee sanadkan ayaa xoojiyay baahida loo qabo ganacsiyada inay maalgashadaan aragti fiican, kontaroolada qiimaha, iyo otomaatiga. Hoggaamiyeyaasha ganacsigu waxay u baahan yihiin ilo, hadda in ka badan sidii hore, si ay u gaaraan go'aanno ganacsi oo xog-ogaal ah. Acumatica awoodeeda barashada mashiinka cusub waxay si caqli gal ah uheli doontaa waqtiga, waxna ka baraneysaa sixitaanka gacanta ee xogta la soo dejiyo si ugu dambeyn loo hagaajiyo habsami u socodka dhaqaalaha isla markaana loo badbaadiyo lacagaha ganacsiyada.
Sidee Cloud ERP u Taageeri Kartaa Iibinta iyo Suuqgeynta?
Cloud ERP waxay ku siin kartaa kooxaha iibka aragti dhammeystiran fursadaha, xiriirada, iyo dhammaan waxqabadyada saameeya go'aanka iibka. Intaas waxaa sii dheer, meeleynta hogaanka iyo socodka shaqada ayaa gacan ka geysan kara maaraynta howlaha iibka si loo wanaajiyo waxtarka. Qalabka ERP wuxuu xoojiyaa socodka macluumaadka, wuxuu yareeyaa wareegyada iibka, wuxuuna kordhiyaa heerarka dhow.
Kooxaha suuqgeynta, daruurta ERP waxay taageeri kartaa xalka suuq geynta isku dhafan, oo si adag ugu xiran dhaqaalaha iyo maareynta maareynta. Haysashada xalka suuq geynta isku dhafan waxay hagaajin kartaa wada shaqeynta ka dhaxeysa iibka, suuqgeynta, iyo taageerada iyadoo waliba la hubinayo ugu badnaan ROI dollar kasta oo suuq gey ah. Waxaa ku lifaaqan nidaamka 'ERP', kooxaha suuqgeyntu sidoo kale waxay ka faa'iideysan karaan nidaamyada Maareynta Xiriirka Macaamiisha (CRM) si ay u maareeyaan hoggaannada, u hagaajiyaan beddelaadyada, u cabbiraan waxqabadka ololaha, ula xiriiraan xiriirada, iyo hagaajinta wax soo saarka. Waxay sidoo kale ka soo qabsan karaan hogaaminta foomamka shabakadda, liisaska la soo iibsaday, xayeysiinta, boostada tooska ah, dhacdooyinka, iyo ilo kale.
Qaab dhismeedkooda ku saleysan websaydhka awgood, inta badan daruuraha ERP waxay la yimaadaan API-yada si dhakhso leh loogu dhexgalo qalabyada kale iyo barnaamijyada barnaamijyada muhiimka u ah hawlgalka. Faa'iidooyinka iibka iyo kooxaha suuqgeyntu waa fara badan yihiin, oo ay ku jiraan dhaqso iyo jaban hirgelin iyo waqti dheereyn suuq-geyn ah oo loogu talagalay istaraatiijiyadda moobiilka. Adoo hirgelinaya dariiqa ERP daruuriga ah, iibka iyo kooxaha suuqgeyntu waxay ka heli karaan xakameyn ballaaran howlaha ay hayaan iyo aragti wanaagsan oo ku saabsan hawlgalkooda waqtiga dhabta ah. Waxay ku sii hayn karaan wax soo saarkoodu sare iyagoo siinaya shaqaalaha khadka tooska ah ee macluumaadka ugu dambeeyay meel kasta iyagoo adeegsanaya aalad kasta waqti kasta.
Tags: acumaticaAPIkeydka kharashkaERPmaaraynta kharashkamarketingsuuq geyntasoftware soiibkadukaanka